GNOME 40 inoratidza zuva rekugadzira faira muNautilus | Linux Vakapindwa muropa
GNOME ndeimwe yenzvimbo dzinoshandiswa graphical yeavo varimo muLinux. Semushandisi we KDE / Plasma, uye ndichida vamwe vakaita sa Deepin kana Budgie, handina chokwadi kana chikonzero ichi chiri chehukama neicho chinouya nekumisikidza muzvinyorwa zvikuru zvehurongwa hwakakurumbira senge Fedora neUbuntu, asi chokwadi ndechekuti akashandisa yakawanda ye. Nekusvika kwe GNOME 40, iyo desktop ichapa kumwe kusvetuka kwemhando, sekutsanangurwa pano Muvhiki yapfuura.
Kubva pakuonekwa kwayo, shanduko yenhamba ichave inopfuura shanduko yezita. Mushure meGNOME 3.38, iyo inotevera vhezheni inofanira kunge iri GNOME 3.40, asi ndakafunga kuita iyo leap kuti irege kuisanganisa neGTK 4.0. Nhau idzi dzichava zhinji, uye imwe yadzo ichave iri iyo nharaunda yanga ichikumbira kwenguva yakareba: Nautilus inoratidza zuva rekugadzirwa kwemafaira kubva kumaneja mumwe chete.
GNOME 40 ichauya mumwedzi waKurume
Zvinoshamisa, ichi chimwe chinhu icho nharaunda yanga ichikumbira kweanenge makore gumi. Pakutanga zvaive zvisingaite nekuti kernel haina kubvumira, asi kubvira Linux 4.13 zvinoita. KDE, uye izvi zvinoita kuti ndinyemwerere nekuti ini ndinoshandisa desktop yavo, yakaunza ruzivo makore mashoma apfuura, uye GNOME ichazviita mumwedzi yakati wandei.
Sezvatinogona kuona mumufananidzo wapfuura, wakaburitswa mu iyi inopinda Kubva kubhulogi rebasa, iyo Nautilus "rondedzero" maonero inoratidza saizi refaira, payakagadziridzwa, uye payakagadzirwa. Mashoko ichaonekwawo patinodzvanya kurudyi mune faira uye sarudza sarudzo kuti uone zvivakwa zvayo, saka hatimanikidzwe kusarudza "rondedzero" maonero kuitira kutora mukana weichi chitsva basa.
GNOME 40 vachasvika vachifamba gore rino uye ichave iri desktop iyo inosanganisira Ubuntu 21.04 uye Fedora 34, pakati pevamwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » GNOME 40 inoratidza zuva rekugadzira faira muNautilus